प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुनुका तीन कारण « Canada Nepal
प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुनुका तीन कारण
काठमाडौँ। सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी स्थायी कमिटीको आइतवारको बैठकमा सहभागी हुनुका तीनवटा कारण भएको उनी निकट नेताले बताएका छन्। पूर्वसभामुख तथा स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसअघि कहिल्यै बैठकमा सहभागी नहुने कुरा बताएका थिएनन्, गलत प्रचार भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो बैठकमा ‘जुन विषय जसरी राखियो राजनीतिक रूपमा त्यो छलफलमा उपस्थित हुन सहमत नभएको र त्यो नगर्न आग्रह गरेको’ नेता नेम्वाङको भनाइ छ। उनका अनुसार स्थिति फेरिएको छ। के हुन ती कारण जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन ‘राजनीतिक रूपमा उचित’ ठाने?
कारण-१: एजेन्डाको आवरण परिवर्तन ?
अघिल्लो स्थायी कमिटीले बैठकको ‘आन्तरिक समस्या’ भनेर छलफलको एजेन्डा निर्धारण गरेको उनले बताए। यसअघि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई अभियोग पत्रको सङ्ज्ञा दिँदै त्यसमा छलफल हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अडान थियो। अब सिधै त्यसमा छलफल नभएर पार्टीको ‘आन्तरिक समस्या’ मा छलफल हुनेछ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाएको विषय सिधै एजेन्डामा परेन।
तर के त्यसमा अब छलफल हुँदैन ?
जति दस्तावेजहरू छन् ती सबै ‘सन्दर्भ-सामग्री’ बनेको नेता नेम्वाङको भनाइ छ। स्थायी कमिटीमा पनि सन्दर्भ सामग्री घोषणाको प्रसङ्ग उठेको उनले बताए।बैठकमा प्रचण्डले जनाएको प्रतिक्रिया सुनाउँदै उनी भन्छन्, “शब्द उताउतामा नजाऔँ, हाम्रो एजेन्डा आन्तरिक समस्या हो, यो सन्दर्भमा सबै कुरा आइहाल्छन्, स्थायी कमिटीले नयाँ प्रस्ताव पनि पास गर्न सक्छ भन्नुभएको थियो। अब कसरी छलफल हुन्छ हेरौँ।” ओलीको विपक्षमा रहेका नेताहरूले सबै दस्तावेजहरूमा छलफल हुने अडानमा छन्।
कारण-२: धुम्वाराहीबाट बालुवाटार
काठमाण्डू धुम्वाहारीमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी कमिटीको अघिल्लो बैठकले फेरि त्यहीँ बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। आइतवार त्यो बैठक धुम्वाराहीमा नबसेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार सारियो। यसअघि पनि धुम्वाराहीमा भएको नौ सदस्यीय सचिवालय बैठक वालुवाटारमा सार्ने गरिएको थियो।
त्योभन्दा पाँच गुणा ठूलो आकारको स्थायी कमिटीका सदस्य र उनीहरूका सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थिति हुने गरि धुम्वाराहीमा बैठक गर्न ठिक नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरूको राय रहेको नेम्वाङले बताए। उनका अनुसार ‘त्यो समेतलाई ध्यानमा राखेर’ प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए र बैठक वालुवाटार सारियो।
कारण-३: लामाप्रति श्रद्धाञ्जली
नेकपाका नेता कमानसिंह लामाको निधन स्थायी कमिटी बैठकको नयाँ एजेन्डा बनेको छ। बैठकले उनको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै उनीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने बताइएको छ। नेम्वाङ् भन्छन्, “त्यो मात्रै एजेन्डा राखौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यी सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा प्रधानमन्त्री बैठकमा नजाने त प्रश्नै छैन।”
त्यसो भएमा बैठक औपचारिकतामा सीमित बन्न पुग्नेछ र विवाद समाधानको निम्ति थप परामर्श र तयारीको निम्ति समय थपिने छ। दुवै पक्षले आआफ्ना पक्षका भेलाहरू देशका विभिन्न ठाउँमा गर्न थालेका खबर आइरहेका छन्। कतिपयले त्यसलाई नेकपा एकताभन्दा विभाजनतर्फ अघि बढेको सङ्केत ठानेका छन्।समाचार: बीबीसी नेपाली सेवा
प्रकाशित मिति : मंसिर २८, २०७७ आइतबार ७ : १५ बजे